INokia X7 iza kuphehlelelwa kumazwe aphesheya njengeNokia 8.1 | I-Androidsis
INokia X7 iza kuphehlelela kumazwe aphesheya ngegama elahlukileyo kunelo bekulindelwe
Kule veki iNokia X7 iboniswe ngokusesikweni, ifowuni entsha yeprimiyamu yomenzi ophakathi kuluhlu. Umboniso malunga esele sikuxelele ngayo iinkcukacha eziphambili. Isixhobo kulindeleke ukuba sisungule kwilizwe liphela kungekudala, phantsi kwegama elahlukileyo, ngokwesiko lezixhobo zomenzi. Kwaye wonke umntu wayecinga ukuba eli gama liya kuba yiNokia 7.1 Plus.
Nangona kubonakala ngathi yenaInkampani inezicwangciso ezahlukeneyo zale Nokia X7. Oko kutyhilwe ukuba igama lehlabathi lefowuni liya kwahluka kunoko kulindelwe ngabaninzi. Ifowuni iya kuba naliphi igama?
Ayizukuba ligama elicacileyo ebesililindile sonke kodwa le Nokia X7 yayiza kuphehlelelwa kwintengiso yamanye amazwe ngegama leNokia 8.1. Malunga nale modeli bekukho ukuvuza kule veki, ke ubukho bayo bubonakala buyinyani. Nangona lukhetho olukhethekileyo kwinxalenye yomenzi.
Oku kuthetha ukuba uluhlu lweNokia 8 luza kuguqulwa kakhulu, Kwaye iba yiphrimiyamu ekumgangatho ophakathi. Eli licandelo ekukhuleni kwalo okuye kwaqhuma ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, ukongeza kukhuphiswano olwandayo. Ke le Nokia X7 iya kuba neembangi ezininzi.
Yintoni okwangoku Asazi ukuba le Nokia X7 / Nokia 8.1 izakuqaliswa nini kwintengiso yamanye amazwe. Inkampani ngokwayo iqinisekisile ukuba izakuqaliswa, kodwa abakayiniki imihla okwangoku. E-China sele ifumaneka, apho uphawu lwandisile khona ngo-2018. Kodwa asinazo iindaba zeYurophu.
Silindile ke Yazi ngokukhawuleza ngakumbi malunga nokuqaliswa kwesi sixhobo eYurophu. Inokwenzeka ukuba yenzeke ngaphambi kokuphela konyaka, ke kwiiveki ezimbalwa kufuneka sibe sinolwazi ngakumbi ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia X7 iza kuphehlelela kumazwe aphesheya ngegama elahlukileyo kunelo bekulindelwe
Kutyhilwe igama elinokwenzeka leXiaomi Black Shark 2
I-Golfmasters ngowona mdlalo wegalufa wezilwanyana ungawuphosa ebusweni bakho